èoveèijim - 塞尔维亚语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: èoveèijim (塞尔维亚语 - 缅甸语)
Nebo je nebo Gospodnje,azemlju je dao sinovima èoveèijim.
ကောင်းကင်ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်း ကင်ဖြစ်၏။ မြေကြီးကိုကား လူသားတို့အား ပေးတော် မူပြီ။
Na poslovima èoveèijim nema ih, i ne muèe se s drugim ljudima.
သူတို့သည် လောကဓံဒုက္ခမရှိ။ လူများကဲ့သို့ အနှောင့်အရှက်ကိုမခံရကြ။
နောက်တဖန်သူတို့၏ တပ်မက်ခြင်းတရားကို မကျင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ကျင့်လျက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအသက်အပိုင်းအခြားကျန်ရစ်သောကာလကို လွန်စေတတ်၏။
Neka bude ruka Tvoja nad èovekom desnice Tvoje, nad sinom èoveèijim kog si utvrdio sebi!
လက်ျာလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူ၊ ကိုယ်တော် အဘို့ ခိုင်မာစေတော်မူသော လူသား၏အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်ပါစေသော။
Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih medju sinovima èoveèijim
အိုထာဝရဘုရား၊ ကယ်တင်တော်မူပါ။ သူတော် ကောင်းမျိုးသည် ပြတ်၍ သစ္စာရှိသောလူမျိုးသည် လူသားတို့တွင် ကွယ်ပျောက်ပါ၏။
Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nemi progovorivi glasom èoveèijim zabrani bezumlje prorokovo.
ထိုဗာလမ်သည် မတရားသော အမှု၏အခကို တပ်မက်၍၊ မိမိဒုစရိုက်အတွက်ကြောင့် ဆုံးမခြင်း ကိုခံရ၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ စကားမပြောနိုင် သော မြည်းသည်လူဘာသာအားဖြင့်မြွက်၍၊ ထို ပရောဖက်၏ မိုက်မဲခြင်းကိုမြစ်တားလေ၏။
Evo idu dani, govori Gospod, kad æu zasejati dom Izrailjev i dom Judin semenom èoveèijim i semenom od stoke.
ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဣသရေလပြည်၊ ယုဒပြည်၌ လူမျိုးစေ့နှင့် တိရစ္ဆာန် မျိုးစေ့ကို ကြဲရသော အချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။
Straite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteæi od svega ovog to æe se zbiti, i stati pred Sinom èoveèijim.
Vukoh ih uzicama èoveèijim, uima ljubavnim; i bih im kao oni koji im skidaju jaram s èeljusti, i davah im hranu.
လူကို ဆွဲတတ်သော ကြိုးတည်းဟူသော မေတ္တာ ကြိုးနှင့် ငါဆွဲငင်၏။ ပါးရိုးအနားသို့ ထမ်းဘိုးကို ရွှေ့၍ ဖြည်းညှင်းစွာ ကျွေး၏။
Kako je mnogo u Tebe dobra, koje èuva za one koji Te se boje, i koje daje onima koji se u Te uzdaju pred sinovima èoveèijim!
ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သော သူတို့အဘို့ သိုထားတော်မူ၍၊ လူသားတို့ရှေ့မှာ ကိုယ်တော်ကို ခိုလှုံ သော သူတို့အဘို့ ပြုပြင်တော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော် သည် အလွန်ကြီးလှပါ၏။
I vidite i èujete da ne samo u Efesu nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi, govoreæi: To nisu bogovi to se rukama èoveèijim grade.
ယခုတွင် ထိုပေါလုက၊ လူလက်ဖြင့် လုပ်သမျှ တို့သည် ဘုရားမဟုတ်ဟုဆိုသဖြင့်၊ ဧဖက်မြို့မှစ၍ အာရှိပြည် တရှောက်လုံးကုန် မတတ်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သည်ကို သင်တို့သည် မြင်လျက်၊ ကြားလျက်ရှိကြ၏။
A to si video gvodje pomeano sa kalom lonèarskim, to æe se oni pomeati sa semenom èoveèijim, ali neæe prionuti jedan za drugog kao to se gvodje ne moe smeati s kalom.
I to ti se èini malo, Boe, nego si govorio i za dom sluge svog na dugo vremena, i postarao si se za tu slavu zakonom èoveèijim, Gospode Boe.
သို့ရာတွင် အိုဘုရားသခင်၊ ထိုကျေးဇူးတော်ကို သာမညကျေးဇူးဟု ထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်ကို ကြာမြင့်စွာသော ကာလနှင့်ယှဉ်လျက် မိန့်တော်မူပါသည်တကား။ အို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကို ဘုန်းကြီးသော သူကဲ့သို့ မှတ်တော်မူပါသည်တကား။
A bee tada divova na zemlji;ai posle, kad se sinovi Boji sastajahu sa kæerima èoveèijim, pa im one radjahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu.
ထိုကာလ၌၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်ကြီးမားသော သူအချို့ရှိကြ၏။ ထိုနောက်၌လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ သားတို့သည်၊ လူသမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ ရသောသားတို့သည်၊ အားကြီးသောသူ၊ ရှေးကာလမှစ၍၊ ကျော်စောသောသူ ဖြစ်ကြ၏။
interested parties (英语>他加禄语)chandravarchi shala (英语>印地语)阿卜杜拉载入该国历史 (简体中文>日语)felõlem (匈牙利语>希腊语)mujhe english samjh me aati hai (印地语>英语)sifat keterbukaan (马来语>简体中文)perceraian (马来语>简体中文)punca kuasa dua (马来语>英语)legal snafus (英语>阿拉伯语)exp (威尔士语>希腊语)do you really havingalover? (英语>捷克语)säkerhetsbedömningarna (瑞典语>英语)দেখাও (孟加拉语>阿拉伯语)解放报日本民众渴望和平 (简体中文>韩语)isn't it (英语>葡萄牙语)tabung duit (马来语>英语)subiscono (意大利语>英语)цбнфбуфю (乌克兰语>俄语)célébrités (法语>阿拉伯语)me gusta panocha (西班牙语>英语)spezia (英语>土耳其语)evangeliet (丹麦语>他加禄语)hi hru hun? hi bb (英语>西班牙语)wo din gay (英语>印地语)已经与政府官员讨论了一个星期 (简体中文>英语)